Ifulethi entliziyweni yesixeko! - I-Airbnb
Ifulethi entliziyweni yesixeko!
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uBenedetta iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ukuba ujonge indawo epholileyo uyifumene eyeyakho! Ifakwe entliziyweni yesixeko kwaye isondele kakhulu kwizibuko kunye nesikhululo sikaloliwe, indawo yobuchule!
Indawo entle iyafumaneka kumbindi wesixeko.
Ikhitshi yokutya ixhotywe ngokupheleleyo kwaye nayo yonke into oyifunayo ukupheka ngokuzimeleyo. Igumbi linesofa encinci kunye netafile yamaplanga yakudala. Ikhabhathi encinci yeencwadi kunye neTV encinci igqibezela ukuhombisa.
Kwigumbi lokulala kukho ibhedi ephindwe kabini ekhululekile kakhulu. Isifuba sedrowa kunye nehanger yeempahla zisesandleni sakho ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlambela eliphambili lineshawari. Elinye igumbi lokuhlambela, elincinci kodwa lixhotyiswe ngeshawari, likufuphi neveranda.
Ifulethi likwaxhotyiswe ngomatshini wokuhlamba, ofumanekayo ukuhlala ixesha elide.
Utshintsho lokuqala lwelinen (amaphepha kunye neetawuli) lufakwe kwixabiso. Ngexesha lasehlotyeni, iitawuli zaselwandle nazo zinikezelwa, zihlala zibandakanyiwe kwixabiso!
Indlu inezifudumezi ezizimeleyo kodwa ekubeni sisakhiwo esidala akukho lift kwaye ibekwe kumgangatho wesithathu.
Le paki imoto nje iimitha ezimbalwa kude indlu kwaye ixhomekeke imali € 1 ngeyure evekini ukususela-8 ukuya ku-13 yaye ngomhla we-15 ukuya ku-20, ukhululekile ukususela nge-13 ukuya kwi-15 yaye ukusuka 20 ukuya 8. iiholide i Free.
Iimitha ezimbalwa ukusuka kukho kwakhona ipaki yemoto egadiweyo i-Odeon Parking (i-URL EFIHLEKILEYO) enexabiso leyure le-€ 1 ngeyure kodwa ngokunokwenzeka kokupasa okuncinci ukuba ungumsebenzi okanye umkhenkethi.
Yindawo yokuhlala elungele izibini okanye iintsapho ezinabantwana (ukuba kunxityelelwane nabo ndingongeza ibhedi yabantwana kwigumbi eliphindwe kabini!)
4.68 out of 5 stars from 429 reviews
4.68 · Izimvo eziyi-429
Indlu imi kumbindi weLivorno, isitalato esisecaleni seVia Ricasoli, phakathi kwePiazza Cavour kunye nePiazza Attias. Ukuthenga ke ngoko kuqinisekisiwe kwaye kuya kubakho iindawo apho unokuchitha ubusuku obahlukileyo!
Kufutshane kakhulu (imizuzu eli-10 ngeenyawo) sisithili saseVenice, apho unokukhwela isikhephe kwimijelo yaseMedici ebizwa ngokuba yi "Fossi".
Imizuzu emibini ngeenyawo kwaye uphambi kweSinagoge. Ukuqhubeka eminye imizuzu emibini ungafikelela kwiDuomo, i-cathedral yaseSan Francesco, ePiazza Grande. Kufuphi kakhulu ekhaya, uhambo lwemizuzu eli-10, e-Piazza Cavallotti, "imarike" ifumaneka yonke imihla (ngaphandle kweCawa): Apha unokuyonwabela intsomi yokwenyani ye-Leghorn kunye neemveliso ezimnandi ezinje ngeziqhamo, imifuno, intlanzi, itshizi kunye nokunye okuninzi!
Ndizohlala ndikhona xa ndingena ukuze ndidibane neendwendwe zam ngokobuqu kwaye ndonwabele ukubanceda xa kukho imfuneko. Ndihlala imizuzu emi-5 kude ukuze ndifumaneke kulo naluphi na uhlobo lwesidingo. Kwiimeko ezinqabileyo kakhulu ukuba andinako ukubakho ngokobuqu, umyeni wam okanye udadewethu uya kuza.
Ndizohlala ndikhona xa ndingena ukuze ndidibane neendwendwe zam ngokobuqu kwaye ndonwabele ukubanceda xa kukho imfuneko. Ndihlala imizuzu emi-5 kude ukuze ndifumaneke kulo naluphi…